Wool Felt, Pendanti ekeresimesi gbazee, Synthetic Felt - Huasheng
E hiwere Hebei Huasheng Felt Co., Ltd dị ka nnukwu ụlọ ọrụ aka ọrụ buru ibu, akwa a na-eteghị akwa na 1970, ọ dịkwa na Nangong & Shijiazhuang, China.
Anyị bụ mba dị n’ọkpụkpụ nke ụlọ ọrụ akwa a na-anaghị akpa na China, na onye nrụpụta ihe nkwado nke China Railway Harmony Locomotive EMU (CRH3-380).
NSOGBU AKW PKWỌ AK MKỌ B. ỌR.
Tdị T112 112 122 132 njupụta (g / cm3) 0.10-0.50 0.10-0.43 0.30-0.42 0.25-0.35 Osisi (mm) 0.5-70 2-40 2-40 2-50 Wool ọkwa Austrian Merino Wool Chinese Wool Agba Na-acha ọcha White / isi awọ / agba ojii ma ọ bụ Pantone agba Width 1m ogologo 1m-10m Technics Wet pressed Asambodo ISO9001 & SGS & ROHS & CE, wdg 1.Firm. A na-emechi mkpọchi eriri ndị ahụ ọnụ ma ọ gaghị emeghe. 2.Abrasion iguzogide. Akpịrị ajị a na-agagharị agagharị nwere ezigbo ihe owuwu nke bụ abrasion ...
A na-eji ajị anụ eji eme akwa Wool na-abụkarị 100% ajị Ọhụrụ. Ha agaghị emepe emepe ma ọ ga - adịgide ruo ọtụtụ afọ. Ha size bụ ezigbo maka kacha akọrọ arụmọrụ. Ha dị mma maka ịkwado ihe nku dị ka quilts na Jaketị. Iji bọọlụ na-ehicha ajị anụ na-azọpụta gị akpụkpọ ahụ site na kemịkalụ ndị a na-eji akwa draya na ihe ndị na-eme ka ọ dị nro, ọ na-azọpụtakwa onye ọkpọ nkụ na nsị n'aka nke ndị a. Ọ bụ usoro akụ na ụba ọzọ iji kpuchie akwa akwa na-egbu egbu na-egbu mmiri na soft softers. Nke…
Igosi anya ugogbe anya a, ị nwere ike tinye iko gị ọfụma ma chekwaa ya ọcha. Akpa ugogbe anya a na-eji Slip na imepe, ị nwere ike itinye ma wepu iko gị dị mfe. Akpa ugogbe anya a abụghị naanị nwere ike ibu iko, kamakwa igodo, kaadị, lipstick na obere ihe ndị ọzọ. N'iji elu a na-ahụ anya, igbe igbe ugogbe anya a dị nro ma dị mma iji metụ aka, obere akpa obere akpa. Mpekere eyeglassese a dị mma maka ọkọlọtọ nke ugogbe anya, enyo anya nchekwa, mgbochi glare compu ...
A na-eme panini Acoustic site na 100% PET, site na iji agịga agịga. Usoro mmepụta ahụ bụ nke anụ ahụ & nke gburugburu, enweghị mmiri mkpofu, mmiri na-anyụ, mkpofu, enweghị mgbakwunye.Our polyester fiber Acoustic Panels na-erite uru site n'ọtụtụ uru, ha na-enweta ụda a na-eme, na-enye njikwa akwara iji belata ọnụ ọgụgụ ụzụ na ime ụlọ. PET acoustic panets anyị na-egbu egbu, nke na-abụghị nke allergenic, nke na-enweghị mgbakasị ahụ ma ghara inwe ihe mgbochi formaldehyde ma nwee NRC dị elu: 0.85.100% polyester a ...
Ihe Odighi ihe choro coasters & ihe ndozi ihe Ntinye akwukwo ndi n’ebubata uzo obibi akwụkwọ nyefe ikuku nke di n’iru. Logo nhọrọ Laser Scanning, silkscreen, labeelu, akpukpo anụ akpụkpọ anụ, wdg. Anyị ji ajị anụ 100% bụrụkwa ihe ebumpụta ụwa, nke a ga-emegharị mmegharị nke pụtara na enweghị nsi ọjọọ. Ọ & ...